Dingana Finoana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Dingana amin'ny finoana
Naman'i Jesosy Kristy izy ireo ary tia an'i Marta sy Maria mpiray tam-po tamim-pitiavana. Nipetraka tany Betania izy ireo, kilaometatra vitsivitsy avy ao Jerosalema. Tamin'ny alàlan'ny teniny, ny asany ary ny fahagagana nataony, dia nampahery azy ireo hino azy sy ny vaovao tsarany.
Taloha kelin'ny fankalazana ny Paska dia niantso an'i Jesosy ireo anabavy roa, satria narary i Lazarosy. Nino izy ireo fa raha miaraka aminy i Jesosy, dia mahavita manasitrana azy izy. Tao amin'ny toerana nandrenesan'i Jesosy sy ny mpianany ny vaovao, dia hoy izy taminy: "Ity aretina ity dia tsy mitarika ho amin'ny fahafatesana, fa manome voninahitra ny Zanak'olona". Nohazavainy taminy fa natory i Lazarosy, nefa midika koa izany fa maty izy. Nampian’i Jesosy fa fotoana iray tokony handraisan'ny tsirairay fepetra vaovao amin'ny finoana izany.
Nankany Betania i Jesosy sy ny mpianatra, fa tao Lazarosy efa tao nandritra ny efatra andro. Nony tonga i Jesosy dia hoy i Marta taminy: «Efa maty ny rahalahiko. Nefa na dia izao aza, fantatro: izay angatahin'Andriamanitra dia homeny anao ». Ary i Marta dia nijoro ho vavolombelona fa i Jesosy dia nahazo ny tsoan'ny Ray ary nandre ny valiny: «Hitsangana ny rahalahinao satria izaho no fitsanganana amin'ny maty sy fiainana. Izay mino ahy, dia ho velona na dia maty ary izay rehetra mitoetra ao ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mihevitra ve ianao? » Hoy izy taminy: "Eny tompoko, mino aho".
Rehefa nitsangana niaraka tamin'ireo nisaona teo alohan'ny fasan'i Lazarosy i Jesoa ary nasainy nesorina ny vato dia nangataka an'i Marta i Jesosy mba handray dingana hafa amin'ny finoana. "Raha mino ianao dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra". Nisaotra ny rainy i Jesosy satria henony foana ary niantso tamin'ny feo mahery hoe: "Lazarosy, mivoaha!" Nanaraka ny antson'i Jesosy ny maty, nivoaka ny fasana ary velona (avy amin'ny Jaona 11).
Hoy ny teniny: "Izaho no fananganana ny maty sy fiainana", dia nanambara i Jesosy fa izy no Tompon'ny fahafatesana sy ny fiainana. Marta sy Maria dia nino an'i Jesosy ka nahita ny porofo rehefa nivoaka avy tao am-pasana i Lazarosy.
Andro vitsy taty aoriana dia maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy mba hamoahana ny helokay. Ny nitsanganany tamin'ny maty no fahagagana lehibe indrindra. Velona i Jesosy ary famporisihana ho anao fa hiantso anao amin'ny anarany izy ary hitsangana amin'ny maty. Ny finoanao ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manome toky anao fa handray anjara amin'ny fitsanganany amin'ny maty koa ianao.
Nataon'i Toni Püntener